EXO အဖွဲ့ဝင် တဖြစ်လဲ ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သူ D.O. ဟာ စစ်ထဲကထွက်လာတာနဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ဇာတ်လမ်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ကူးနေပါတယ်။ လတ်တလော “The Moon” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံကားမှာ အာကာသယဉ်မှူးလေးအဖြစ် ရိုက်ကူးနေတာ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အသိပါ။
ထို ဇာတ်ကားကို လက်စသတ်ရိုက်ကူးနေသလို နောက်ထပ် “Secret” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို November 21 ရက်နေ့ကနေ 2022 ခုနှစ် January လ 1 ရက်နေ့ထိ ရိုက်ကူးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုဇာတ်လမ်းဟာ 2007 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်ကားကို remake ပြန်ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းက အထက်တန်းကျောင်းသား အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပေမဲ့ Korea Version ကိုတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အချစ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ် အသက်သွင်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇာတ်ကြောင်းကတော့ Piano အထူးပြုကျောင်းသား ဖြစ်တဲ့ Jay Chou ဟာ ကျောင်းပြောင်းတဲ့နေ့မှာဘဲ Piano လေ့ကျင့်တဲ့အခန်း ကနေ ထူးခြားတဲ့ သံစဉ်လှလှလေးကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ထိုကနေ အစပြုပြီး ကျောင်းသားအချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခု D.O. တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းကို Yeungnam တက္ကသိုလ်ထဲမှာ ဆက်တင်တွေ စ ..ဆောက်နေပါပြီ။ ကျောင်းက အရမ်းလှပြီး ဆောင်းဦးကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေဟာ ကဗျာဆန်ဆန်လေး လှနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တခါတလေ နှင်းဖွဲဖွဲလေးတွေ ကျနေပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ … နောက်နှစ်မှာ ကြည့်စရာဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်တော့ တိုးပါပြီနော်။ D.O. ဟာ ဒီကားထဲမှာ Piano ကျောင်းသားမို့ Piano ကို ရှယ်တီးပြအုံးမှာပါ။ D.O. ရဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားပုံစံလေးကို စောင့်မျှော်ရင်ခုန်နေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Next Yang Mi နာမည်ကို မဆိုင်ဘဲ ထည့်သုံးတာကြောင့် စိတ်ပုပ်သူအဖြစ် ဝေဖန်ခံရတဲ့ Chen Xiaoyun »
Previous « အသံကြားရုံနဲ့ ဘယ်သူဆိုတာ တန်းသိနိုင်သည့်အထိ ထူးခြားတဲ့ အသံတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Kpop idol (10) ယောက်